Malunga nathi Ilungelo Lokwazi
Ilungelo lase-US lokwazi liqela lophando eligxile ekukhuthazeni ukungafihli kwempilo yoluntu. Sisebenza kwihlabathi liphela ukubhengeza ukungalunganga komdibaniso nokusilela kukarhulumente okubeka emngciphekweni isidima senkqubo yethu yokutya, okusingqongileyo kunye nempilo yethu.
Ukusukela ngo-2015, sifumene, sathumela kwi-intanethi saza sanika ingxelo ngamawaka oshishino kunye noorhulumente, kubandakanya uninzi olufunyenwe ngokunyanzeliswa komthetho kwimithetho evulekileyo yeerekhodi. Amaxwebhu ayimfihlo-afunyenwe yi-USRTK ngoku athunyelwe kwifayile ye- Ukutya kwe-UCSF kunye nomzi mveliso wamachiza amathala eencwadi ukufikelela simahla kuluntu.
Umsebenzi wethu ube negalelo kuphando lweNew York Times ezintathu; Amaphepha ali-10 emfundo; amanqaku alithoba kwi-BMJ, enye yejenali eziphambili kwezonyango; kwaye iindaba zosasazo zehlabathi Ukubhala ukuba ukutya kunye neenkampani zamakhemikhali zisebenza njani ukukhusela iinzuzo zazo ngokuchaphazela impilo yoluntu kunye nokusingqongileyo.
Uphando lwethu lubeka umceli mngeni omkhulu kwishishini njengesiqhelo kushishino lokutya kunye neekhemikhali. Ngoku ka uxwebhu lweMonsanto olutyhilwe kwi-2019, Uphando luka-USRTK luza kuchaphazela yonke le shishini.
Siyathemba ukuba uyalixhasa ilungelo lethu lokwazi kwaye uncede ukwandisa uphando lwethu ngokunikela namhlanje. Ilungelo lase-US lokwazi ngumbutho ongajonganga kwenza nzuzo ngama-501 (c) (3) kunye neminikelo irhafu.
Abaxhasi kunye nokufakwa kwe-IRS
Abaxhasi bethu abakhulu kunye neefayile ze-IRS ziyafumaneka Apha.
UGary Ruskin, uMlawuli oLawulayo kunye noMsunguli we-Co
UGary Ruskin ngumlawuli olawulayo kunye nomseki-mbumba wase-US kwiLungelo lokuKwazi. UGary waqala ukwenza umsebenzi wokubonelela uluntu ngo-1987. Kwiminyaka elishumi elinesine, wakhokela i Iprojekthi yoXanduva lweCongressal, eyayichasa urhwaphilizo kwiNkongolo yase-US. Kwiminyaka esithoba, wayengumlawuli olawulayo kunye nomseki-mbumba (kunye noRalph Nader) we Isilumkiso soRhwebo, eyayichasa ukuthengiswa kwayo yonke indawo kunye nobomi bethu kunye nenkcubeko. Ngo-2012, wayengumphathi wephulo leProposition 37, inyathelo lokuvota kwilizwe liphela lokufaka iilebheli zokutya okwenziwe ngemfuza eCarlifonia. Wayekwangumlawuli we Iziko loMgaqo-nkqubo weNkampani. Ubhale amanqaku awabhalileyo okanye awabhalileyo kwi- Washington Post, los Angeles Maxesha, Wesizwe, Umama, Ukubeka iliso kumanye amazwe, Iindaba zezeMpilo kokusiNgqongileyo, Ikota yeMilbank, Ijenali ye-Epidemiology kunye neMpilo yoLuntu, Ijenali yoLuntu Nkqubo wezeMpilo, Ubumbano kunye neMpilo, Health Public isondlo, Ijenali yehlabathi yoPhando lwezeNdalo kunye neMpilo yoLuntu, Impilo yoLuntu ebalulekileyo nabanye abaninzi. Ngo-2013, wabhala a umbiko kubuso bobuhlakani kwimibutho engenzi nzuzo. Ufumene isidanga sakhe kwezenkolo kwiKholeji yaseCarleton, kunye nesidanga semasters somgaqo-nkqubo woluntu kwiYunivesithi yaseHarvard yaseJohn F. Kennedy School of Government. Ukwangutata wentombi eneminyaka eyi-14 kunye nonyana oneminyaka emi-3 ubudala.
Nxibelelana noGary: gary@usrtk.org
Landela uGary kwi-Twitter: @GaryRuskin
UStacy Malkan, uMseki-kunye noMhleli woLawulo
UStacy ngumseki-mbumba kunye nomlawuli-ngokubambisana wase-US Ilungelo Lokwazi, iqela lophando elingenzi nzuzo elijolise kwishishini lokutya. Ungumbhali wencwadi ephumelele amabhaso, Ayisiyiyo nje ubuso obuhle: Icala elibi leShishini lobuhle (Umbutho omtsha, ngo-2007), kunye nomseki-mbambano we-Campaign for Safe Cosmetics, umanyano lwempilo engenzi nzuzo kunye namaqela ezendalo aphefumlela iinkampani zezithambiso ukususa iikhemikhali eziyingozi isipolishi mazipho, iimveliso zomntwana, iimveliso zokwenza kunye neenwele. Umsebenzi kaStacy upapashiwe kwi Iphephancwadi lexesha, i ENew York Times, Washington Post, Nature Biotechnology nakwezinye iindawo ezininzi ezithengisayo kwaye ubonakele ngaphakathi Youth Vogue, Wall Street Journal, Iindaba zeSan Jose Mercury, ISan Francisco Chronicle, Imelika yaseMelika elungileyo, INdemokhrasi ngoku kunye neefilimu ezininzi ezibhaliweyo kubandakanya Uvavanyo lwaBantu iveliswe nguSean Penn, Isibhakabhaka esiPinki kwaye Umboniso bhanyabhanya onukayo (ngoku edlala kwiNetflix). Ngo-2012, uStacy wakhonza njengomlawuli weendaba kwi-California Right to Know inyathelo lokuvota ekubhaleni ukutya okwenziwe ngemfuza. Ungumlawuli wezonxibelelwano owayengumnakekeli wezeMpilo ngaphandle kweHarm, eyafumana i-mercury ezibhedlele kwaye yavala indawo zokutshisa inkunkuma yezamayeza kwihlabathi liphela. Ngaphambi komsebenzi wakhe kwimpilo yendalo esingqongileyo, uStacy wasebenza iminyaka esibhozo njenge ntatheli kunye nomhleli ophetheyo, kwaye wapapasha iphepha ndaba lophando eligubungela ukusetyenziswa komhlaba kunye nemicimbi yokusingqongileyo eColorado. Uhlala e-Bay Area nomyeni nonyana wakhe.
Qhagamshelana noStacy: stacy@usrtk.org
Landela uStacy kwi-Twitter: @StacyMalkan
UCarey Gillam, uMlawuli woPhando
UCarey Gillam ngumbhali wencwadi ephumelele amabhaso, “I-Whitewash: Ibali loMbulali wokhula, uMhlaza kunye noRhwaphilizo lweNzululwazi”(Island Press, 2017) kunye nentatheli egqala, umphandi kunye nombhali onamava angaphezulu kweminyaka engama-20 kwishishini leendaba. Phambi kokujoyina i-US Right to Know, uGillam uchithe iminyaka eli-17 njengo Umnxibelelanisi omkhulu weReuters, Inkonzo yeendaba zamanye amazwe. Kule ndima, waye wagxila ekugubungeleni ukutya kunye nezolimo kugxilwe ikakhulu ekunyukeni kwetekhnoloji ye-biotech yezityalo, uphuhliso olunxulumene nemveliso yokubulala izinambuzane, kunye nefuthe lokusingqongileyo, kwaye wavelisa ulwazi olunzulu lweenkampani eziphambili kwezolimo ezibandakanya IMonsanto, iDow AgroSciences, iDuPont, iBASF, iBayer kunye neSyngenta.
UGillam waziwa njengenye yeentatheli eziphambili kwilizwe elixoxa ngale micimbi kwaye uhlala ebuzwa ukuba athethe kunomathotholo nakumabonakude kwaye avele kwiinkomfa ukuze abelane ngolwazi analo ngemicimbi ekuxoxwa ngayo eshushu ebandakanya ukutya nezolimo. Uhlala e-Overland Park, UKansas, nomyeni wakhe nabantwana abathathu.
Nxibelelana noCarey: ukhathalelo@usrtk.org
Landela ukhathalelo kwi-Twitter: @CareyGillam
Becky Morrison, uMphandi
Njengomphenyi emva kweeprojekthi zophando kushishino lwesoda kunye neswekile, u-Becky uzisa kunye naye ubutyebi bamava axhasa inkqubo yokutya esempilweni kunye necacileyo. Isidanga se-2016 senkqubo ye-NYU's Study Study master, umsebenzi wakhe ugxile kwizicwangciso zomthetho nezomgaqo-nkqubo ezijolise ekupheliseni ukuthengiswa kokutya ebantwaneni kunye nokunciphisa izifo ezinxulumene nokutya, ngakumbi kwiziselo ezineswekile. Phambi kokujoyina i-USRTK, wayesebenza kwi-Ofisi yeGqwetha Jikelele leNew York State kwi-Bureau of Consumer Frauds, apho waphanda ngentengiso enokubakhohlisa kwiimveliso ezijolise ebantwaneni. Usebenze njengoMlingane woMgaqo-nkqubo wokutya kwiLungu leBhunga lesiXeko saseNew York uBen Kallos.
Owayesakuba ngumpheki kunye nokutya, u-Becky uhlala epheka ekhayeni. Uhlala eBrooklyn, eNew York nomyeni wakhe kunye nonyana oneminyaka esixhenxe ubudala.
Nxibelelana noBecky: becky@usrtk.org
Landela u-Becky kwi-Twitter: @Ntsikeleloe
USainath Suryanarayanan, Ph.D., Inzululwazi yabasebenzi
NjengoSosayensi Wezabasebenzi e-US Ilungelo Lokwazi, uGqirha Sainath Suryanarayanan uzisa ubunzulu kunye nobubanzi bolwazi kunye namava kwizifundo zentlalo zesayensi kunye netekhnoloji, ibhayoloji yezinambuzane, kunye neekhemesti zamaseli kunye neselula. Ungumbhali ophambili we Ukulahleka kweenyosi: iNzululwazi, ezepolitiko kunye neMpilo yobusi (I-Rutgers University Press, 2017). Ukuzoba udliwanondlebe olubanzi, uphando ngobuzwe, kunye nohlalutyo loovimba, Iinyosi Eziphelayo ibonisa indlela ukusebenzisana kwembali phakathi kweengcali ze-entomologists kwiiyunivesithi zesibonelelo somhlaba, iSebe lezoLimo lase-US kunye neenkampani zezolimo ziye zayila iindawo zangoku zolwazi kunye nokungazi malunga nokudibana phakathi kwembulala-zinambuzane kunye nempilo yeenyosi. Igalelo le-Sai kwiingxoxo malunga nezopolitiko zolwazi kunye nokungazi, indawo yabangengabo oososayensi kwimveliso yolwazi, kunye nezifundo ze-multispecies ziye zavela kwiimagazini ezininzi kubandakanya Ukubandakanya iTekhnoloji yeSayensi kunye noMbutho, Ubuntu beNdalo, uMgcini(EUK), Izifundo zeNtlalo zeSayensi, yaye Inzululwazi, iTekhnoloji kunye neMilinganiselo yoLuntu. Iprojekthi yakhe yangoku yeencwadi iphonononga uphando lwezinto eziphilayo kwiindawo zezinambuzane njengomhlaba obalulekileyo wophuhliso lwethiyori kunye neendlela malunga nomgaqo-siseko woluntu kwixesha lasemva kwexesha.
Nxibelelana no Sai: sainath@usrtk.org
Landela i-Sai kwi-Twitter: @lungelos
UCharlie ube lilungu le IGreenpeace yaseMelikaIsebe lophando ukusukela ngo-2010. Phakathi kowe-1989 nowe-1999, wasebenza noGreenpeace njengelungu leGreenpeace Toxics Campaign, eququzelela amaphulo okuvala ukutshisa inkunkuma enetyhefu nokuphelisa iiplastiki zePVC. Phakathi kuka-1999 no-2004, uCharlie wanceda ukuhlela Ukubeka iliso kumanye amazwe kwaye wayalela uMkhankaso woHlaziyo lweZiko e Imisebenzi yabemi. Ungumbhali-mbhali we Amashishini Abantu: Ukulawula iiNkampani kunye nokuBuyisa iDemokhrasi (IBerrett-Koehler, 2003), kunye namanqaku okuphendula ngokusingqongileyo nakwindibano, iingxelo kunye neebhloko. Phakathi kuka-2004 no-2010, uCharlie wakhokela Iziko loMgaqo-nkqubo weNkampani, ukuphanda kunye nokupapasha amanqaku amaninzi kunye neengxelo malunga nezihloko ezahlukeneyo ezinxulumene namandla ombutho kunye noxanduva, kubandakanya ukurhafiswa kwirhafu, ukuhlawulwa kwesigqeba, ukuphendula ngoonokontraka kunye nolwaphulo mthetho. Ngeli xesha wayesebenzisana kwaye wanceda ukugcina iwebhusayithi yokubukela, HalliburtonWatch.org, siyisebenzisela ukunyanzela uxanduva lokuphendula kukontraka kukarhulumente kunye nohlaziyo. UCharlie uphumelele kwiKholeji yaseAmherst.
ULisa ngumlawuli olawulayo we Iziko leMidiya kunye neDemokhrasi. Usebenze njengomcebisi omkhulu kuwo omathathu amasebe kurhulumente womanyano kunye nezinye izithuba.
Uye wasebenza njengegcisa elikhokelayo ekukhuthazeni inkululeko yoluntu kwindawo yokhuseleko lukazwelonke nanjengonjingalwazi wezomthetho ohambelana nesinye sezona zikolo ziphambili zomthetho kweli lizwe. Izikhundla zakhe zobunkokeli zangaphambili zibandakanya:
Usekela-Gqwetha Jikelele kwiOfisi yoMgaqo-nkqubo Wezomthetho / uPhuhliso loMgaqo-nkqubo kwiSebe lezoBulungisa lase-US (ephethe imiba emininzi yomgaqo-nkqubo woluntu kunye nolwaphulo-mthetho kunye nokukhokela iqela elisebenzayo kumagama aphakanyisiweyo-asebenze phantsi kwamaGqwetha Jikelele uJanet Reno noJohn Ashcroft )
Umcebisi oyiNtloko woNyulo kwiKomiti yeeNkundla zase-US yeeNgwevu yoSihlalo / weLungu eliSebenzayo
Isicwangciso seQhinga soMthetho esiPhezulu se- I-American Civil Liberties Union (kwimigaqo-nkqubo yezokhuseleko neyokujonga)
Sekela Mlawuli we Iziko leZifundo zoKhuseleko kuZwelonke
USekela weNtloko yeCandelo III laBagwebi kwiCandelo leenkundla zaseMelika (kubandakanya ukongamela iOfisi yoKwazisa ngezeMali malunga nokuziphatha kwezomthetho)
Amangcwaba angqina njengengqina lobuchwephesha kukhuseleko lwesizwe / ukhuseleko lwasekhaya kunye nemiba esekuhleni phambi kweNdlu yeeNgwevu yase-US kunye neNdlu yabameli. Uye wabonakala njengengcali kwi-CNN, ABC, NBC, CBS, MSNBC, CNBC, BBC, C-SPAN, kunye nezinye iinkqubo zeendaba nakwiinkqubo ezininzi zikanomathotholo, kubandakanya iRadio kaRhulumente kaZwelonke, iDemokhrasi ngoku!, I-Air America kunye nePacifica Unomathotholo. Uhlalutyo lwakhe lucatshulwe kwiThe New York Times, kwiWashington Post, kwiLos Angeles Times, eChicago Tribune, kwiBoston Globe, kwi-Associated Press, eReuters, e-USA namhlanje, kwisizwe, kwinkqubela phambili, kula maxesha, uMama Jones, I-Vanity Fair, i-Congressional Quarterly, i-Roll Call, i-National Journal, i-Legal Times, i-Newsday, kunye ne-Wired, phakathi kwabanye, kunye ne-intanethi kwi-Huffington Post, iMemo yokuThetha iMemo kunye nezinye iiblogi. Uye wanceda ngemigqaliselo yezomthetho kwaye uhlalutyo lwemicimbi yezokhuseleko kuzwelonke lupapashiwe nguThetho lweTexas Law kunye nolunye upapasho. Wayekwangumhleli olawulayo weSicwangciso-qhinga sikaZwelonke esiDibeneyo sokuNcitshiswa kweMipu.
UBen Lilliston nguMlawuli wexeshana we-Co-Executive Director kunye noMlawuli wezoBuchule baseMaphandleni noTshintsho lweMozulu kwiZiko lezoLimo kunye noMgaqo-nkqubo wezoRhwebo. UBen ebesebenza kwaye ebhala malunga nemicimbi yezorhwebo yamanye amazwe kunye nendlela abadibana ngayo nomgaqo-nkqubo wezolimo wase-US ukusukela ngo-2000, kubandakanya nabaphathiswa abaninzi boMbutho woRhwebo weHlabathi, ukuhamba kweCAFTA, iiBhili ezininzi zeFama kunye neengxoxo zangoku zorhwebo. Kutshanje ubhale ingxelo, Iindleko zemozulu zoRhwebo oluSimahla. Ezinye iingxelo zamva nje zibandakanya: Inyama enkulu iginya i-TPP kwaye Izibonelelo ezingaziwayo, Iindleko ezifihliweyo: Iingubo zeMbewu zeNeonotinoid, isivuno sesivuno kunye nezipollinator. Wayenenxaxheba kwiKomiti ye-UN yoRhwebo noPhuhliso (i-UNCTAD) yezoRhwebo kunye noPhononongo lwezeNdalo ngo-2013, incwadi Umyalelo woTshintsho (Lexington), kunye nombhali-mbhali wencwadi Ukutya kweNjineli yemvelo: Isikhokelo saBathengi (Inqanawa). Usebenze njengomphandi, umbhali kunye nomhleli kwimibutho eliqela kubandakanya iZiko lokuFunda loMthetho oPhendulayo, Intatheli yoLwaphulo-mthetho oluHlanganisiweyo, ukuJongwa kwaMazwe ngaMazwe, uManyano lokuThintela umhlaza kunye noQinisekiso. UBen unesidanga seBachelor of Philosophy kwiDyunivesithi yaseMiami (eOhio).